DGPL: Jawaab Maqaalkii Kasoo baxay Warsidaha AGE NEWS
Nov 22, 2008: Gen. Cadde Muuse oo ka hadlay burcad badeedda..
dhegeyso | soo rogo (mp3)
Jawaab Maqaalkii Kasoo baxay Warsidaha AGE NEWS
Axad, 23-Nov 2008
Boosaaso, Puntland: Maqaalka Lagu soo daabacay Warsidaha AGE waa mid xaqaa'iqa ka fog oo aan uqalmin in lagu daabaco paper kasoobaxa dalka Australia sababtoo ah waa been abuur soocan, aflagaadho iyo waxyeelo loogaysanayo Maamul Goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed iyo shirkadaha ay macaamilka sharciga ah wada leeyihiin.
Hadaan xogyar oo taariikhiya hadaan ka xuso DGPL...
Taariikhdii la'aas assay 1998.
Paarlamaan, golo xukuumadeed iyo garsoor
Masaaxo ahaan wexeey kakooban tahay 7gobol oo qiyaas ahaan lamida hal dhibic sadex (212,000 Sq km) khariidada Soomaaliya.
Hadaan xusno arimaha burcad badeeda ma aha sida news paperku uga been sheegay balse waa bilcaksigeeda.
Halkan ka soo rogo
Maamulka Puntland iyo shacab keeduba wey ladagaalamaan burcad badeeda waxayna u arkaan ineey yihiin Argigixisadii badaha dunida waxaana markhaanti ka ah inta hawlgal DGPL kusamaysay oo waxna lagusoo qaqab tay waxna ladilay oo boqolaal kamida xabsiyada kujiraan waxaa intaas raaca qayladhaan ay Maamulka puntland udirayeen Dunida si caawinaad loolasoogaaro ay burcad badeeda ku tirtiraan ama ay kaga hortagaan inteysa qaan gaarka noqon.
Waxaan kaxunahay markasta oo ay qabsadaan gadiid badah burcadbadeedu waxaan soo jeedinaa inaan lacag madax furasho lasiin ee hawlgal lagusameeyno laakiin waxaa na dhabar jabiya oo si qarsoodiya lacag madax furasho ah ku siiya shirkada ha is kaleh gaadiidka la afduubay.
Warsidaha AGE ha xog wareeysato quwadaha waaweynee xeebaha puntland jooga inta ay been abuur wax yeelaynaya maamul iyo shirkado hanaan wanaagsan ku wada shaqaynaya waxaan uqaadanaynaa maqaalkaanu inuu uhiilinayo sida shakhsiyaad reer puntland ah oo danahooda gaarka ah u burburinaya jiritaanka Puntland markii lagu lamaaniyo burcada maamulkii puntland oo ladagaalamayay.
Qoraalkan waxaa kamuuqda ama kadhadhamaya cadawtinimo loo abaabulayo maamul goboleedka Puntland in lagu wax yeeleeyo horumarkeeda iyo jiri taankeeda.
Balse waxaa isweydiin leh maxaa warsidaha gaarsiiyay cadawtinimada bareerada ah oo magacooda wax yeelo u keenikara sumcad xumo kaga timaada akhristayaasha reer Australia iyo dhamaan dunida.
Qofka maqaalkaan qoray iyo warsidaha AGE daabacay ma garan karaan maamulka Puntland iyo shacabkiisa ladagaalanka ay kula jiraan sida:
Argagixisada, burcada, sicirbararka iyo kuwa soomalida sheeganaya ee weerarka ku haya qaar kamida gobolada puntland.
Dhacdooyinka ku saabsan puntland dhaqaaleheeda iyo sida loo isticmaalay waaka been sheegay qoraalku.
Laakiin waxaan usheegay naa shirkadaha ay quseeyaan in loo istic maalay waajibaadka daruuriga ah ee puntland iyo dhamaan wax tarka cid kasta oo danwadaag ay yihiin Puntland.
Burcadu waa burburiyaha dhaqaalaha DGPL sababtoo ah canshuurta dakada Bossaso waxay tahay ama waxay ahaaan jirtay laf dhabarta dhaqaalaha Puntland sidaas darted intii burcad badeedu ay jireen gaar ahaan 2008 da Dakadu wax soosaar malahayn waana sababta shaqaalaha dawlad goboleedaka puntland ay ku waayeen mushaarooyinki iyo adeegi daruuriga u ahaa nolol maalmeedka.
Wasiirka Warfaafinta & Isgaarsiinta Ahna ku Simaha
Wasaarada Kaluumaysiga & Dakadaha
C/raxmaan Maxamed Saalah
Qoraalkii Warsidaha THE AGE NEWS halkan ka akhri......
:::(Boosaaso)- Socdaalkaygii Soomaaliya 2008 - Xasan Nuur